Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2022? Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2022?
Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2022?
Isha sawirka: forbes.com
Miyaad ka mid tahay kuwa u malaynaya inaysan jirin wax qiil ah sababta caymiska baabuurkoodu qaali u yahay? Sida kharash kasta oo kale, caymiska baabuurtu wuxuu u muuqdaa inuu yahay amarka maalintii oo xitaa ka sarreeya heerka sicir -bararka ee caadiga ah.
Waa inay jirtaa sabab wanaagsan oo sidaas ah. Sidaa darteed, maqaalkan, waxaad ku arki doontaa waxa go'aaminaya heerka caymiska baabuurkaaga iyo waxaad samayn karto si aad u yarayso.
Markaa, naso oo akhri maqaalkan si aad u fahanto waxa go'aaminaya caymiska baabuurkaaga.
Waa maxay Caymiska Baabuurka?
Caymiska baabuurku waa heshiis u dhexeeya adiga iyo shirkad caymis ah si ay kuugu magdhabaan khasaaraha lacageed marka shilal ama xatooyo dhacaan.
Shirkadda caymiska noocan ahi waxay oggoshahay inay qayb ka mid ah khasaarahaaga ka mid noqoto shuruudaha.
Waa maxay waxyaabaha saameeya Caymiska Baabuurkayga?
Waxaa jira dhowr arrimood oo go'aaminaya inta aad ku bixinayso caymiska baabuurkaaga. Waxay kala yihiin:
#1 Diiwaanka Wadista
Shirkad caymis ayaa baratay taariikhda wadistaada ka hor inta aysan cayminin gaarigaaga.
Taariikhdan waxaa ku jira dhammaan shilalkii aad horay u soo martay, inta jeer ee aad jebisay xeerarka taraafikada, iyo sidoo kale tigidhada xawaaraha.
Badbaadada aad wadato, way yaraanaysaa dareenka ay kugu hayso inaad shil gasho, laakiin haddii taariikhdaada baabuur wadistu aanay ahayn nasiib darro, way adkaan doontaa inaad hesho caymis baabuur oo jaban.
#2 Taariikhdaada Deynta
Waxaa jirta sheegasho si weyn loo aqbalay oo ah in sida aad ugu xun tahay bixinta deynta aad soo aruurisay ay sheegayso xirfadaada wadista.
#3 Meesha aad ku nooshahay
Goobta aad ku nooshahay waxay saamayn weyn ku leedahay caymiska baabuurkaaga.
Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay meel shilal badan laga diiwaan geliyo ama ay cufan yihiin, waxaad ku bixin kartaa qaddar ka badan caymiska gaarigaaga kuwa ku nool meel ay ka yar yihiin diiwaanka shilalka.
la xiriira: 5 Caymiska Safarka Ardayga ee ugu Fiican: Waxa uu Daboolayo iyo Sababta aan ugu Baahanahay.
Waxaad u badan tahay inaad bixiso kharash ka badan caymiska baabuurka haddii aad ka yar tahay 25 jir
Sidoo kale, kuwa ka weyn da'da 69 waxay la kulmaan khataro badan oo shilal ah.
Waxaa jira saddex gobol oo kaliya (Hawaii, California, iyo Massachusetts) oo aan u baahnayn da'daada si loo go'aamiyo inta aad ku bixinayso caymiska baabuurka. Si kastaba ha ahaatee, sicirku wuu isbedbeddeli karaa mustaqbalka fog.
Hoos waxaa ku qoran shaxda caymiska baabuurka ee dadka ka yar 25 jir iyo wixii ka weyn 69 jir oo ay leeyihiin shirkado caymis oo kala duwan.
Shirkadda caymiska 60 sano jir 23 sano jir
HubintaAmerica $ 165 $ 279
Bristol West $ 87 $ 114
Dhulka caanaha $ 226 $ 400
maroodiga $ 78 $ 121
GAINSCO $ 172 $ 263
Mercury $ 108 $ 143
MetLife $ 74 $ 115
Taliyaha Guud ee Qaranka $ 103 $ 159
Guud $ 196 $ 316
#5 Baabuurka aad Wado
Ma ogtahay in kaxaynta baabuurka saloon ama SUV ay saamaynayso kharashka caymiska baabuurkaaga?
Markaa, xusuusnow inta SUV -yada laga yaabo inay ku socdaan kharash caymis oo hooseeya, baabuurta kale ee qalaad waxay ku kici karaan laba jeer qaddarkooda.
Ragga aadka u yar ayaa bixiya caymiska baabuurka. Sidoo kale, fikirka ah in raggu ka taxaddar la'aanta baabuur -wadidda marka loo eego dumarka dhiggooda ah ayaa leh hab ay ku ballaariyaan caymiskooda baabuur.
Nasiib wanaag, waddamada qaarkood sida Montana, Hawaii, Michigan, North Carolina, Massachusetts, iyo Pennsylvania ma tixgeliyaan arrimaha jinsiga inta ay dejinayaan caymiska baabuurka.
Sidoo kale Akhri: Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2022
#7 Waxaad Waddaa Masaafo Dheer
Haddii masaafada ay tahay inaad daboosho si aad u shaqeyso maalin kasta ay dheer tahay, waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn inay ka turjumeyso caymiska gaarigaaga.
Marka shirkaddaada caymisku ay rabto inay ogaato meesha saxda ah ee aad ku nooshahay oo aad ka shaqeyso, waxay hubaal tahay inay rabaan inay ogaadaan masaafada hore iyo gadaal.
Sideen U Bixiyaa Caymiska Baabuurkayga?
Si aad uga dhigto kharajka caymiskaaga baabuurku inuu ahaado mid ku habboon, waxaanu soo bandhignay dhawr waxyaalood oo ay tahay inaad sameyso si aad u yareyso qiimaha hoose.
#1 La Soco Caymiska Baabuurka
Markay tahay waqtigii aad cusboonaysiin lahayd caymiskaaga baabuurka, ha ku degdegin inaad doorato cusboonaysiinta. Hubi inaad weydiiso caymisyada kale ka hor intaadan saxiixin.
Ma dammaanad qaadi karno sababta oo ah caymis bixiyahaagu wuxuu ahaa mid raqiis ah wakhti ka hor, inay wali bixin doonaan adeeg isku mid ah iyo isla qiime.
Wax badan ayaa laga yaabaa inay isbedeleen ma ogtahay?
#2 Helitaanka Dhimista Caymiska Baabuurka
Shirkad kasta oo caymisku waxay bixisaa qiimo dhimis kala duwan oo u dhexeeya ciidamada, arday, darawal xirfad leh.
Sidaa darteed, waa muhiim inaad hubiso qiimo -dhimisyada ugu badan ee suurtogalka ah oo aad ka faa'iidaysato.
Sidee Shirkadaha Caymisku Lacag U Sameeyaan? | 2022 Qaab Ganacsi oo Buuxa
#3 Dukaamee oo raadi Bixiyaha Caymiska Jaban
Kani waa kan ugu dayacan dhammaan xulashooyinka ku saabsan sida loo bixiyo wax ka yar caymiska baabuurka. Si dhakhso ah ayaad tan u hubin kartaa link si aad u ogaato sida aad isbarbardhigi karto kharashaadka oo laga yaabo inaad u keydiso xaggeeda.
Way fududahay in la fahmo sababta caymiska baabuurkaagu u yahay mid xad dhaaf ah. Hadda oo aad ogtahay sababta ay sidaas u tahay, xoogaa xoog u geli sidii aad u heli lahayd dhammaan qiima dhimista aad mudan tahay.
Dhacdo lama filaan ah ayaa ku dhici karta qof kasta oo naga mid ah wakhti kasta. Taasi waa sababta qof walba uu ugu dadaalayo inuu helo…
5 Qorsheyaasha Caymiska Ilkaha ee ugu Fiican Waayeelka 2022
Daryeelka ilkaha waa muhiim da 'kasta, laakiin waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in Medicare uusan daboolin…
10ka Shirkadood ee Caymiska Safarka ugu Fiican 2022
Way fududahay in la iska tuuro qiimaha caymiska safarka ilaa aad u baahan tahay. Oo dad badan oo safar ah ayaa leh xoog…